ख्याल गर्नुस युवायुवतीमा यस्ता लक्षणहरु देखिए मा डिप्रेसन हुनसक्छ, लक्षण र बच्ने उपायहरु..अवस्य सेयर गर्नुहोस धेरैलाई काम लाग्नेछ।:: Sanchar Garage
ख्याल गर्नुस युवायुवतीमा यस्ता लक्षणहरु देखिए मा डिप्रेसन हुनसक्छ, लक्षण र बच्ने उपायहरु..अवस्य सेयर गर्नुहोस धेरैलाई काम लाग्नेछ।
बिहिबार, अशोज २५, २०७५
यी लक्षणहरु देखिए डिप्रेसन हुनसक्छ, लक्षण र बच्ने उपायहरु..पुरा पढी सेयर गर्नुहोस धेरैलाई काम लाग्नेछ
दास, दुःखी, बोर वा दिक्दार अनुभव हुँदैमा डिपे्रसन भएको बुझ्न मिल्दैन। तर, यसरी उदास अनुभव हुनु मनोरोगको प्रमुख लक्षण भने अवस्य हो। मनोरोगको लक्षण मानिने उदास अनुभवलाई धेरैले रोगकै अंश हो कि प्रतिकूल परिस्थितिको स्वाभाविक प्रतिक्रिया भनीे छुट्याउन सक्दैनन्। जसले गर्दा समस्याको पहिचान र उपचारमा कठिनाइ हुनेगर्छ।डिप्रेसनका बहुसंख्यक रोगीमा यो समस्याको न निदान हुन्छ, न उपयुक्त उपचार नै। त्यसैले जुनसुकै समाजमा मनोरोगका बिरामीको संख्या अत्याधिक हुनेगर्छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनले संसारमा मानव जातिलाई सताउने १० मुख्य स्वास्थ्य समस्यामा मनोरोगले निकट भविष्यमा नै उच्च रक्तचापलाई उछिनेर पहिलो हुने प्रक्षेपण गरेको छ।
यति भयावह अवस्थातर्फ उन्मुख हुँदा पनि मनोरोगबारे जागरुकता देखिँदैन। यसलाई प्राथमिकतामा पारिएको छैन। मनोरोगको प्रमुख हिस्साका रुपमा रहेको डिप्रेसनबारे हाम्रो समाजमा उतिधेरै छलफल र बहस हुने गरेको छैन। जसको फलस्वरुप यो रोग भुसको आगोजस्तो फैलिँदै गइरहेको छ।
डिपे्रसनका धेरै रोगी सही उपचार नपाएर रोकथाम हुनसक्ने विभिन्न जटिलता भोगिरहेका हुन्छन्। यो समस्या कम गर्न सबैले मनोरोगबारे कम्तिमा आधारभूत तथ्यहरु जानी राख्नु आवश्यक छ। ‘यो त कमजोर मन भएकाहरुलाई लाग्छ, मेरो मन बलियो छ मलाई लाग्दैन’ भन्ने धेरै मानिस यसको चपेटामा परेका छन्। त्यसैलेस जुनसुकै समाज, वर्ग, उमेर समूहका मानिसलाई सताउन सक्ने डिप्रेसनबारे आफूले पनि जानी राखौँ र अरुलाई पनि बताऔँ।
कस्तो उदास अनुभवलाई डिप्रेसन भन्ने ?
जब कुनै व्यक्तिको उदास अनुभव आफ्नो नियन्त्रणभन्दा पर पुग्छ भने त्यो डिप्रेसनको लक्षण हो। यस्ता अनुभव कम्तिमा दुई हप्तासम्म हरेक दिन हुन थाल्यो, जति कोसिस गरे पनि उदास अनुभवले छोडेन, यस्तै अनुभवका कारण बेचैनी बढ्यो, दैनिक गतिविधिमा असर पर्न थाल्यो र अरु लक्षण पनि देखा पर्न थाले भने यसलाई सामान्य उदासीपन ठान्नु गलत हुनेछ। यस्तो अवस्थालाई डिप्रेसन भएको बुझ्न सकिन्छ।
मनोसामाजिक रुपले त्यक्त, विषम परिस्थिति र तनावग्रस्त व्यक्तिमा प्रायः लाक्षणिक रुपमा र पछि रोगकै रुपमा डिप्रेसनको समस्या देखिन्छ। यद्यपि तनावरहित अवस्थाका व्यक्तिलाई पनि डिप्रेसनले सताउन सक्छ। विविध कारणले सेरोटोनिन, नरअड्रिनालिन जस्ता स्नायु रसायनको कमी, तिनले काम गर्ने विशेष अवयव ९रिसेप्टर० र तिनको उत्पादन हुने प्रक्रियामा समस्या हुँदा उदासी देखापर्छ। वंशाणुगत र जैविक जोखिमलाई मनोसामाजिक तत्वहरु र परिस्थितिले डिप्रेसनतिर धकेल्न बढावा दिन्छ। यसरी कुनै व्यक्ति डिप्रेसनको शिकार हुनमा मनोसामाजिक र जैविक तत्वहरुको अन्तरक्रिया हुने गर्दछ।
डिप्रेसनमा के–कस्ता लक्षण देखिन्छन्र ?
डिप्रेसन भएका व्यक्तिमा मानसिक, शारीरिक र सामाजिक रुपमा असर पार्ने निम्न लक्षण देखिन्छन्।
मानसिक वा मनोसामाजिक लक्षण-
प्रायःजसो समयमा उदास, दुःखी, बोर वा दिक्दार रहनु।
दैनिक कामकारबाही र सामाजिक व्यवहार वा अरुसँगको अन्तरसम्बन्धमा रुचि कम हुँदै जानु। अरुबाट एक्लिनु वा एकान्तमा रहनु।
केही काम गर्ने जाँगर र आत्मविश्वास हराउनु।
सोच्न र सम्झन नसक्ने हुनु।
आफू बेकामे, बेसहारा भएको ठान्नु र भविष्य अन्धकार लाग्न थाल्नु।
सानातिना कुरामा अत्याधिक चिन्ता लाग्नु र छट्पटी बढ्नु।
बाँच्ने चाहना कम भई आत्महत्याका विचार आउनु।
कडा खालका डिप्रेशनमा हुँदै नभएका कुरा सुन्ने, देख्ने र आभास हुनेजस्ता लक्षण देखिनु।
अस्वाभाविक रुपले सिथिल वा कमजोर अनुभव हुनु।
भोक कम वा ज्यादा हुनु र त्यसैअनुसार तौलमा कमी वा बृद्धि हुनु।
निद्रा कम वा बढी लाग्नु र बिहान उठ्दा ताजा महसुस नहुनु। जिउ भारी र बोधो हुनु।
यौन चाहना र तुष्टिमा कमी आउनु।
कब्जियत हुनु र महिनावारीमा गडबडी आउनु।
कतिपय बिरामीमा टाउको, जिउ वा शरीरका अरु भाग दुखिरहने तर शारीरिक परीक्षणमा चित्त बुझ्दो प्रमाण नभेटिने हुनु।
डिप्रेसनको उपचार बहुआयामिक हुने गर्छ। यसमा तनावको समाधान, यसको बहन गर्ने क्षमता, सीप र कला अभिवृद्धि गर्ने मनोवैज्ञानिक विधि उपयोगी हुन्छ। अरु व्यक्तिसँग गलत र अनुपयुक्त अन्तरक्रिया र एकआपसको कलह पनि डिप्रेसनको पृष्ठभूमि तयार पार्न सक्छ। डिप्रेसन भएपछि पनि कतिपय बिरामीको अन्य व्यक्तिसँगको सम्बन्धमा चिसोपन आउन सक्छ। अतः यस्ता व्यक्तिको अरुसँगको सम्बन्ध सुमधुर बनाउने र सरसल्लाह अनि सहयोगको वातावरण बनाउने तरिका उपचारको अभिन्न पाटो हुनेगर्छ। उदास हुने व्यक्तिहरुको सोच, विचार र व्यवहारमा हावी हुने विकृतिलाई सुधार गर्ने मनोवैज्ञानिक तरिका पनि बिरामीहेरी आवश्यक पर्न सक्छ।
अहिले बिरामीको लक्षण र आवश्यकता हेरी विविधखालका लक्षण कम गर्ने औषधि पाइन्छन्। रोग निको पार्ने र पछि हुनबाट रोकथाम गर्ने गुण भएका भरपर्दा र सुरक्षित धेरै औषधिको विकास भइसकेको छ। कडा डिप्रेसनमा चिकित्सकको सल्लाहमा बिजुलीको ‘सेक’ दिने उपचार पनि अति उपयोगी र सुरक्षित मानिन्छ। उपचारबाट लक्षण हटेपछि पुनस्र्थापनाका कार्यक्रम आवश्यक हुन्छ।
बिरामी र परिवारले के गर्ने ?
पहिला त, यो रोगलाई बुझ्नु नै ठूलो कुरा हो। परिवारमा कसैलाई डिप्रेसन छ भने ऊप्रतिको समझदारी एकदम आवश्यक हुन्छ। यसका लागि आफूले सत्यतथ्य बुझेर अरुलाई पनि यसबारे बुझाउनुपर्छ। रोगकै हिसाबले यो समस्या भएको छ भने बिना हिच्किचाहट सम्बन्धित चिकित्सक वा विज्ञसँग परामर्श लिनुपर्छ। यसको निदान बिरामीको उपचारका लागि हुनेगर्छ, अन्यथा सोच्नु हुँदैन। डिप्रेसनको निदान भएकोमा चिन्ता मानेर बस्नुभन्दा पनि उपचारको उचित उपयातिर लाग्नुपर्छ। सहयोगी साथीभाई र आफन्तको सल्लाह लिनु बिरामीले आनाकानी मान्नु हुँदैन। सकेको काम, हलुका व्यायाम वा यस्तै कुरामा मन बहलाउने कोसिस गर्नुपर्छ।
विज्ञको सल्लाहमा औषधि आवश्यक मात्रा र अवधिका लागि सेवन गर्नु लाभदायी हुन्छ। बिरामीलाई उपचारका लागि सम्बन्धित स्थानमा लान, उपचार सुरु गर्न, फलोअपमा रहन, ठिक भएपछि पनि पुनस्र्थापना गर्न र पछि दोहरिन नदिन परिवारजन र साथीभाइको ठूलो भूमिका रहनेगर्छ। परिवारका सदस्यले यस्ता बिरामीको औषधि राखिदिने र सेवनका लागि हौसला दिने गर्नुपर्छ। कतिपय बिरामीले आफैंँलाई हानी पुग्ने गतिविधि गर्ने सम्भावना हुने भएकाले विशेष सावधानी अपनाउनु जरुरी छ।
रोकथामलाई के गर्ने ?
डिप्रेसनले जसलाई पनि सताउन सक्छ तर खास जोखिम वा खतरा भएका व्यक्तिबारे सावधानी अपनाउनु आवश्यक छ। यसको खतरा भएका व्यक्तिले त्यसै अनुसार आफ्नो जीवनशैली, व्यवहार, आहार, विहार र विचारमा सन्तुलन राख्न सिक्नुपर्छ। स्वस्थ आहार, विहार र विचारले समग्र स्वास्थ्यका लागि लाभ गर्छ भने उदासिन मनोरोगको रोकथाममा पनि सघाउँछ।
डिप्रेसनमा जान नदिन मन र शरीरलाई स्वस्थ राख्नु जरुरी छ। तनाव बहनका सीप र क्षमता बढाउने तरिकास योगस व्यायामस साथ, सहयोग र सुमधुर सम्बन्धको माहोलस समझदार र अनुशासित परिवारस अस्वस्थ प्रतिस्पर्धारहित समाजस संस्कृति र परम्परा अनुकूल व्यवहार आदि कुरामा ध्यान दिनुपर्दछ। रोग लागेर निको भइसकेकाहरुले पुनः नदोहरियोस् भन्नका लागि सतर्कता अपनाउनुपर्छ। जस्तैः विज्ञको सल्लाह अनुसार आवश्यक अवधि र मात्रामा औषधि लिने, धूमपान–मध्यपानबाट टाढा रहने, कुनै रोग लागेमा समयमै उपचार गराउने, निद्रा पर्याप्त पुग्नेगरी सुत्ने आदि।
आफू वा परिवारका सदस्य डिप्रेसनमा रहेको कुरा चाल पाएपछि आवश्यक उपचार थाल्न रोगका लक्षण, उपलब्ध उपचार विधि, सेवासुविधा र अन्य आवश्यक जानकारीबारे सजग रहनुपर्छ। यसले उपचारमा ढिलाइ र उपचार नपाउँदा हुन सक्ने आत्महत्या जस्ता घटना रोकथाममा सहायता पुग्छ। तसर्थ, तपाईंहामी सबैले डिप्रेसनबारे जानकारी भएको लेख पढौँ, जानकार र विज्ञहरुको राय सुनौँ, यसबारे खुलेर कुरा गरौँ र सत्यतथ्य बुझिराखौँ। अरुलाई पनि यसबारे जान्न, सुन्न, बुझ्न र कुरा गर्न प्रेरित गरौँ। डिपे्रसनको समस्यालाई लुकाउने भन्दा पनि यसबारे व्यापक मन्थन थालौँ।
नेकपा गुल्मी अर्घाखाँची अभियानको आबधिक समिक्षा सम्पन्न
सरकार दीर्घकालिन योजना सहित अगाडि बढेको छ : मन्त्री खनाल
विप्लबका गिरफ्तार नेता कार्यकर्ता रिहा भएपछि पार्टीले ग¥यो सम्मान
Some Useful Tips To Prep Your Body For Summer
sanchar garage agency kathmandu 1 .Start dancing Chooseadancing style of
यौनइच्छा बढाउन चाहनुहुन्छ ? खानुहोस् यी चिजहरु (हेर्नुहोस पुरा जानकारी )
संचार ग्यारेज –सनम खत्री सेक्स मानबिय जिवनमा अति आबस्यक कुरा
बरिष्ट पत्रकार रबि लामिछाने पनि बलात्कारी लाइ फासी दे भन्दै माईती घर मडलामा….(हेर्नुहोस पुरा समाचार )
संचार ग्यारेज सनम खत्री नेपालमा बढ्दो बलात्कारका घटनाहरुलाई सरकारले वास्ता
अनिल नेपाली अर्घाखाँची ९ फागुन नेत्रविक्रम चन्द विप्लब नेतृत्वको नेपाल
अनिल नेपाली अर्घाखाँची ९ फागुन नेपाल सरकारका कृषि तथा पशुपन्छी
अनिल नेपाली गुल्मी ८ फागुन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विप्लवका गुल्मी
प्रक्राउ परेका नेता रिहा भएपछि विप्लप माओवादीले गरेको बन्द फिर्ता
अनिल नेपाली अर्घाखाँची ७ फागुन अर्घाखाँचीमा प्रक्राउ परेका नेता धरौटीमा
शिक्षाको विकासले मात्र नगरको विकास हुन्छ : भूमिकास्थान नगरपालिका नगर प्रमुख थापा
अनिल नेपाली,अर्घाखाँची भुमिकास्थान नगरपालिका नगरप्रमुख रेशम थापाले शिक्षालाई निशुल्क
व्यबसायिक पशुपालन गर्ने कृषकको लागि नगरले उल्लेखीय रुपमा सहयोग गर्छ नगर प्रमुख थापा
अनिल नेपाली अर्घाखाँची ७ फागुन भुमिकास्थान नगरपालिका वडा न १,२,७,८
सभ्य र सुखी समाज निर्माणको लागि सबैले विशेष ध्यान दिनुपर्छ नगर उपप्रमुख वि.क
अनिल नेपाली अर्घाखाँची ३ फागुन नेपाल सि आर एस कम्पनी
हिरासत भित्र रहेका विप्लबका नेताहरुले मनाए २४ औ जनयुद्ध दिबस
अनिल नेपाली अर्घाखाँची फागुन १ विप्लब नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट
२४ औ जनयुद्ध दिबसको अबसरमा जिल्ला अस्पतालका विरामीलाई फलफुल वितरण
अनिल नेपाली अर्घाखाँची नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना
सल्लाकार : विपी नेपाल
सम्पादक : हिराछाबी श्रीशा
ब्यबस्थापक : वसन्त
रिपोटर : अनिल नेपाली
© 2016-2018 sanchargarage.com All Right Reserved | Site by : SobizTrend